TANAMBE MANANARA-AVARATRA : Arenina ny Hopitaly, nitondra anjara biriky ny Faritra Analanjirofo
Asiam-panavaozana amin’izao fotoana izao ny Hopitaly ao amin’ny Kaominina Tanambe distrikan’i Mananara-Avaratra. 11 août 2017
Vokatry ny fahanterana, dia efa ahitana fahasimbana maro ity toeram-pitsaboana ity. Manoloana izany indrindra, nitondra anjara biriky amin’ny asa fanarenana ny Faritra Analanjirofo.
Natolotra ny Ben’ny tanànan’i Tanambe Mananara-Avaratra izay mandalo ao Fenoarivo-Atsinanana ny 4 aogositra lasa teo ireo fanampiana avy amin’ny fiadidiana ny faritra. Tafo fanitso miisa 40 no natolotra tamin’izany.
Nandritra io fanomezana fanampiana ny kaominina Tanambe io koa no nanoloran’ny fiadidiana ny faritra Analanjirofo simenitra 5 lasaka ho an’ny fokontany Tanambao I kaominina Ampasina-Maningory distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana. Simenitra ho fanatsarana ny biraom-pokontany ao an-toerana.
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (632) 15 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (363) 15 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (287) 15 mars 2018 Tsy naharototra ny vahaoka i Hery Rajaonarimampianina FITSIDIHANA TAO AMBILOBE (287) 20 mars 2018 Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY (214) 19 mars 2018 Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » (190) 19 mars 2018